Softmedal - Landa isoftware yamahhala, i-Android Game APK
I-Anno 1800 ikhishwa njengomdlalo wamasu. I-Anno 1800 yinguqulo yango-2019 yomdlalo weqhinga obelokhu wakhiwa iminyaka eminingi. I-Anno 1800, eyakhiwe yiBlue Byte futhi yashicilelwa ngu-Ubisoft, ivelele njengomunye wemidlalo yamasu athuthukiswe isikhathi eside. I-Anno 1800, eyehlukile kweminye imidlalo yamasu nesakhiwo sayo esashintsha...
I-UltraEdit iyithuluzi lesisombululo sobuchwepheshe obekulokhu kungukukhetha kohlelo abaningi emhlabeni jikelele, lisekela amafomethi amaningi. Ihlukile kolunye isoftware yombhalo enezici zayo ezithuthukile, i-UltraEdit isihleli sombhalo esisebenza ngokuhambisana nezilimi ezahlukahlukene zokuhlela ezinjenge-txt, hex, XML, HTML, PHP,...
Sawubona Umakhelwane 2 uku-Steam! Sawubona Umakhelwane 2 i-Alpha 1, enye yemidlalo engcono kakhulu yokuthuthumela kwi-PC, manje isiyatholakala ukulanda mahhala. Sawubona Umakhelwane 2 i-Alpha 1 ibitholakala ukulanda mahhala ngaphambi kokukhishwa kwe-Hello Neighbour 2. Sawubona makhelwane, omunye wemidlalo engcono kakhulu yokuthuthumela...
I-Maxnote iyinothi ethatha uhlelo ongayisebenzisa ngokunethezeka ohlelweni lokusebenza lweWindows. I-Maxnote iyinothi ethatha uhlelo lokusebenza ongayisebenzisa kukhompyutha yakho.UMaxnot unikela cishe yonke into izimbangi zayo ezingayenza mahhala kule ndawo yokuncintisana kakhulu. Ungafaka inothi kuhlelo ngaphakathi kwemizuzwana embalwa...
I-Image Tuner uhlelo lwamahhala nolunempumelelo lokuhlela isithombe ongalwenza kalula ukuhlela isithombe sakho sansuku zonke. Abasebenzisi abaningi abadingi izici ezisebenzayo zohlelo olufana ne-Photoshop ukwenza umsebenzi olula futhi ojwayelekile wokukhohlisa isithombe. Ngoba, ngokujwayelekile, imisebenzi yansuku zonke esiyenzayo...
I-Reshade uhlelo lokusebenza olulungisa amaphikseli wesithombe osikhulisayo futhi sikhiqize isithombe esezingeni elingcono. Ukuhlenga kabusha uhlobo lwesicelo sokuhlela isithombe. Bekufanele ngabe ubone ukuthi ikhwalithi yanoma isiphi isithombe esinokulungiswa okuphansi iyancipha uma usiletha ezingeni lesinqumo eliphakeme olifunayo. Noma...
I-PDF Unlock uhlelo lokusebenza olwenziwe yi-Uconomix olususa amaphasiwedi kumafayela e-PDF. I-PDF Unlock wuhlelo lokuvula amafayela e-encrypted e-PDF.I-PDF Unlock izofakwa kungekudala ngemuva kokuchofoza kufayela lokufaka futhi izokusa ngokushesha esikrinini sasekhaya. Kepha ngaphambi kokufika kulesi sigaba, qiniseka ukuthi .NET Uhlaka...
ICyber ​​Dust uhlelo lokusebenza lwemiyalezo olusheshayo enesistimu efana ne-Snapchat engasusa imiyalezo ngokuzenzekelayo. ICyber ​​Dust inikeza ukususwa okuzenzakalelayo kwemiyalezo yakho ngemuva kwesikhathi esithile ngenkathi uxoxa nabangani noma abantu emhlabeni jikelele, futhi uhlelo lokusebenza olungasetshenziswa kumaselula...
I-DAEMON Tools Lite wuhlelo lokudala idiski lwamahhala ongavula kalula amafayela wesithombe nge-ISO, BIN, CUE extensions ngokwakha amadiski abonakalayo. I-DAEMON Tools Lite iyisoftware yamahhala nethembekile evumela abasebenzisi ukuthi bakhe ngokushesha futhi kalula amadiski (amadrayivu) abonakalayo kuma-computer abo. Ngosizo lwamadiski...
Uma ufuna imenenja yefayela ehlakaniphile futhi esheshayo ukuphatha amafayela akho, ungazama uhlelo lwe-Orion File Manager. Uhlelo lokusebenza lwe-Orion File Manager likuvumela ukuthi uhlele kalula amafayela akho kumadivayisi wakho we-Android.Uma ufuna ukuhlela kalula amavidiyo, izithombe, amadokhumenti, umculo, amafayela we-APK kanye...
I-Google Chrome isiphequluli se-inthanethi esicacile, esilula nesidumile. Faka isiphequluli sewebhu seGoogle Chrome, sesha i-inthanethi ngokushesha nangokuphepha I-Google Chrome yisiphequluli se-inthanethi samahhala nesidumile esifakwe ubuchwepheshe be-Google obuhlakaniphile. Ukukhetha kokuqala kwabasebenzisi abaningi abafuna ukungena...
IFirefox Quantum yisiphequluli sesimanjemanje esenzelwe abasebenzisi bekhompyutha abanohlelo lokusebenza lweWindows, sisebenzisa inkumbulo encane, sisebenza ngokushesha. Sinesiphequluli esisebenza ngokushesha okukhulu kunohlobo olujwayelekile lweMozilla Firefox, sisebenzisa izinsiza ezimbalwa futhi sinikeza isikhombimsebenzisi sesimanje....
Idizayinelwe i-Android, iZombie Frontier 4 ngumdlalo we-zombie wokuqala owaziwa kakhulu. Abadlali baqoqa izinto zokwakha nezikhali, balwa ukungafi okuguquliwe, ukubukela ama-Zombies kuphuka, ukuzwa umuzwa weqiniso we-apocalyptic. Ukukhishwa okusha kochungechunge, i-xZombie Frontier 4, kungalandwa kusuka ku-Google Play kuye kumafoni...
Nge-Glary Amaculo Eraser, ungahlanza kalula amafayela nemilando engadingekile kwi-hard disk yakho. Uhlelo lwe-Glary Amaculo Eraser ngokuyisisekelo luyithuluzi lamahhala lokusula imikhondo edlule kukhompyutha yakho futhi lungasetshenziswa kalula. Ngenxa yesixhumi esibonakalayo esiyimpumelelo, i-Glary Amaculo Eraser iwabona kalula amaphuzu...
Ithuluzi lokulondoloza uhlelo lamahhala elikuvumela ukuthi wenze kalula izinqubo ezidingekayo zokwenza kahle ngemuva kwesikhathi esithile sokusetshenziswa kukhompyutha yakho. IGlary Utilities iyi-software yamahhala enamathuluzi amaningi anamandla futhi asebenziseka kalula ukuvikela, ukusheshisa, ukulungisa ikhompyutha yakho. Ungakhuphula...
Nge-ComboFix, ungahlanza amagciwane uma isoftware yakho ye-antivirus ingasebenzi. IComboFix iyisoftware yamahhala yokususa igciwane ongayisebenzisa uma ikhompyutha yakho ihlaselwe yi-malware njengama-virus, ama-trojans, ama-rootkits, i-adware, i-spyware, i-malware kanye isoftware yakho yokulwa namagciwane ayihlangabezani nezidingo zakho...
IRegistry Reviver wuhlelo ongaskena ngalo irejista yeWindows, ulungise amaphutha futhi uwasebenzise kahle. IRegistry Reviver iyithuluzi lesistimu eliphelele elikuvumela ukuthi ulungise ngokushesha noma yimaphi amaphutha kuRegistry yeWindows. Ungakhuphula ukusebenza kohlelo lwakho ngosizo lohlelo olukuvumela ukuthi ulungise futhi...
I-EZ Game Booster uhlelo lwe-computer booster olusiza ukuthi udlale imidlalo kangcono ngokwandisa ukusebenza kwekhompyutha yakho. I-EZ Game Booster uhlobo lohlelo lokukhulisa umdlalo oluthuthukisa umuzwa wakho wokudlala ngokuvala izinqubo ezingadingekile nokwenza ngcono ukusetshenziswa kwezinsizakusebenza zekhompyutha.I-EZ Game Booster...
Ukuhamba esibhakabhakeni esiphakeme futhi ibhomu izitha zakho ngendiza yakho yempi ongazihlomisa ngayo. Khetha eyakho indiza yempi futhi uzwe amandla amakhulu ombutho womoya eSky Combat. Dlala ngokumelene nabadlali bangempela ezimpini ze-PvP eziku-inthanethi. Bheka ihluzo ezisezingeni lekhonsoli elinemininingwane emangalisa njengakwiWar...
IHotspot Shield wuhlelo olunamandla lokumela olukuvumela ukuthi ubhekabheke i-inthanethi ngokungaziwa ngokufihla ubunikazi bakho nokufinyelela kumasayithi avinjelwe ngaphandle kwesidingo se-software eyengeziwe. IHotspot Shield, isoftware esekwe ku-VPN, ingenye yesoftware abasebenzisi be-inthanethi ezweni lethu abavame ukuyibiza ngohlelo...
Imininingwane © 2021, softmedal.com. Wonke Amalungelo Agodliwe. Softmedal ikunikeza ithuba lokulanda isoftware yamahhala ye-pc, i-Android APK nomdlalo. Ungathola imidlalo ethandwa kakhulu ye-android kule nkundla yokulanda yamahhala!